Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny Herintaona Nigadràna, Fanamelohana Ho Faty no Atahoran’ireo Iraniàna Mpiaro Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Febroary 2019 12:25 GMT 1	 · Mpanoratra Article 19 Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Politika, Siansa, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Saribe iray fanentanana mampiseho ireo mpiaro tontolo iainana, Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Morad Tahbaz ary Abdolreza Kouhpayeh. fanentanana #anyhopefornature
Ny ARTICLE 19 , fikambanana ho an'ny fahalalahana maneho hevitra, ho namoaka voalohany ny dika tamin'ity lahatsoratra ity, ho ampahany anatin'ny fifanarahana fifampizaràna votoatiny.
Valo ireo mpikatroka ho an'ny tontolo iainana tao Iràna no nofonjaina nandritry ny herintaona mahery, taorian'ny nisamborana sy niampangàna azy ireo ho “mpitsikilo” sy “mpanaparitaka kolikoly eto an-tany”. Notsaraina izy ireo nony farany tamin'ny 30 janoary 2019 teo.
Ny fiampangàna kolikoly atrehan'izy ireo, araka ny lalàna famaizana iraniàna, dia mety hitondra amin'ny fanamelohana ho faty azy ireo.
Ireo mpikatroka valo, Niloufar Bayani, Sam Radjabi, Houman Jowkar, Taher Ghadirian, Morad Tahbaz, Sepideh Kashani, Amir Hossein Khaleghi ary Abdolreza Kouhpayeh, izay samy niasa ho an'ny Persian Wildlife Heritage Foundation  (PWHF) tao Téhéran avokoa, dia voasambotra tamin'ny Janoary 2018 niaraka tamin'i Kavous Seyed-Emami, tale jeneralin'ny PWHF. Maty tamin'ny 8 febroary 2018 i Seyed-Emani , raha mbola nifonja tao amin'ny fonjan'i Evin. Araka ny fitsarana, maty namono tena i Seyed-Emani, saingy na ny vondrom-piarahamonina nasionaly na ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena dia samy nitaky ny hanokafana ny fanadihadiana tsy miankina mikasika ny fahafatesany avokoa, izay mbola tsy nisy hatreto.
Ny tranga ifanandrinan'ny governemanta amin'ireo mpikatroka ireo dia tena mifototra betsaka amin'ny asan'ny vondrona mikendry ny hiaro ny jabira aziatika (guépard) , sakadia teratany avy ao atsinanan'i Iràna sady efa mila ho lany tamingana. Ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ilay vondrona dia nianatra tany ivelan'i Iràna avokoa, tao Kanada sy Etazonia ny betsaka, ary nanana fifandraisana tamin'ireo vondrona Iraisam-pirenena misy an'ireo manampahaizana manokana momba ny tontolo iainana, izay nandeha tany Iràna ny sasany noho ny tanjona te-hahalala bebe kokoa mikasika an'ireo saka ary hanampy araka izany mba hiarovana azy ireo. Nogiazan'ireo iraniàna manampahefana ny rohin'ireo voampanga nifandraisany tamin'ireo anjerimanontolo any ivelany ary nampiasaina izy ireo mba hanohanana ireo fiampangana hoe olona karamain'ny vahiny mpitsikilo ireo mpikatroka ireo fa mody miafina amin'ny hoe manampahaizana manokana momba ny tontolo iainana.
Tany amp-boalohany ireo rehetra voampanga dia nampangaina ho “nanao asa fitsikilovana” ary notànana mandra-piandry ny fotoana histaràna azy, saingy tamin'ny 24 Oktobra 2018, nanambara  ny Fampanoavana ao Teheran, Abbas Jafari Dowlatabadi hoe novàna ny fiampangàna ny efatra tamin'izy ireo, navadika ho “fanelezana kolikoly eto an-tany”, izay mendrika fanamelohana ho faty.
Avy tamin'ny alalan'ireo fiaikena an-tery nataon'ny iray tamin'ireo mpikatroka, izay efa nisintona ny teny nataony, no namolavolan'ireo Mpampanoa lalàna ny ampahany betsaka tamin'ny fitoriana nanenjehana an'ilay vondrona.
Ny 30 Janoary sy ny 2 febroary 2019 teo, niatrika fitsarana tao amin'ny Rantsana faha -15 an'ny Fitsaràna Revolisionera ireo valo mpiaro ny tontolo iainana ireo, fitsaràna notarihin'ny mpitsara Salavati, izay mananan tantara amin'ny famoahana didy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy sy mangeja ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona. Araka ny voalazan'ny Center for Human Rights in Iran  (CHRI) – Ivontoerana Iraniàna momba ny Zon'Olombelona – novakiana nandritra ireny fotoam-pitsaràna ireny ny antsasak'ireo fanamelohana nisy 300 pejy, izay niainga avy tamin'ireo fiaikenkeloka nataon'ny iray tamin'ireo efatra voampanga, izay tsy iza fa Niloufar Bayani. Notapahin'i Bayani imbetsaka ny fitsarana mba hilazàny ny tsy fanekeny, tamin'ny nilazàny fa ireo fiaikena nataony dia noho ny fampijaliana, izay diso avokoa ary efa notsipahany.
Fiampangana henjana sy manahirana maro hafa no natao mikasika an'ireo fitsarana, isan'izany ny hoe natao tanaty efitrano nihiboka ireo fotoam-pitsaràna, tsy navela hifidy izay ho mpisolovava azy ireo voampanga, ary tsy izay ihany fa tsy ny rehetra tamin'ireo mpisolovava notondroin'ny Mpampanoa lalàna no tonga teny amin'ny tribonaly.
Manamafy ireo voampanga fa am-bolana maro izy ireo no natoka-monina sy nampiharana fampijaliana ara-tsaina, fandrahonana ho faty, fanindronana rongony ‘hallucinogène’, ary fandrahonana fisamborana sy famonoana ho faty ny olona ao anatin'ny fianakaviany.
Nanitsakitsaka ny zon'izy ireo ho velona ny fomba fitondrana niaretan'ireo voampanga, ny zony amin'ny fahalalahana maneho hevitra, amin'ny fitsarana tsy mitanila sy handeha amin'ny zotra ara-dalàna. Manamarika ampahany iray amin'ny fironana hanakombona ny vavan'ireo olona izay maneho hevitra mikasika ireo olana ara-tontolo iainana ao amin'ny firenena ihany koa io, amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo fiampangana momba ny asa fitsikilovana.
Ny ARTICLE 19  sy ireo fikambanana hafa miaro ny zon'olombelona dia niantso ny fanafahana azy ireo tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra ary fanokafana avy hatrany fanadihadiana lalina sy tsy mitanila, mikasika an'ireo filazana fisianà fampijaliana sy ireo fitondrana ratsy hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/15/135064/
 Maty tamin'ny 8 febroary 2018 i Seyed-Emani: https://advox.globalvoices.org/2018/03/16/iranian-detainees-face-privacy-violations-public-smear-campaigns/